Safarrada YHT waxay ka bilaabmayaan tilaabooyinka la qaadey May 28! Tigidhada waxaa lagu iibsan doonaa dalabka HEPP | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraSafarrada YHT waxay ka bilaabmayaan tilaabooyinka la qaadey May 28! Tigidhada waxaa lagu iibsan doonaa Codsiga HEPP
23 / 05 / 2020 06 Ankara, 26 Eskisehir, 34 Istanbul, 42 Konya, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu: Iibinta tareenada xawaaraha dheereeya waxay bilaabmi doonaan maalinta labaad ee bisha Ramadaan. Si kastaba ha noqotee, tikidhada tareenka waxaa laga iibsan karaa arjiga moobaylka iyo websaydhka ama lacagbixinta adoo aan la xiriirin. Tigidhada lagama iibin doono xarunta wicitaanka iyo hay'adaha. Iibinta tigidhada waxaa lagu fulin doonaa furaha HES (Hayat Eve Sığar) iyada oo loo sii marayo aaladda xogta macluumaadka ee Wasaaradda Caafimaadka si loo baaro xaaladda rakaabka ee la xiriira COVID-19.
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu wuxuu xusey inay uga mahadcelinayaan hoos u dhaca xawaaraha cudurka, cudurka caadiga ah ee nolosha ayaa bilaaban doona, waqtigan xaadirka ah nidaamka socodsiinta gaadiidka ee tareenka ayaa laga wada qaadi doonaa iyadoo la qaadayo tillaabooyinka.
Wasiirka Karaismailoğlu wuxuu cadeeyay in iridaha xuduudaha iyo xayiraadaha lagu soo rogay xaddiga noocyada cusub ee cudurka dillaaca coronavirus ay leeyihiin saameyn badan oo xagga dhaqaalaha ah oo xilligan ah, Dowladdu waxay qaadday tallaabooyin muhiim ah oo lagula dagaallamayo viruska.
Isagoo hoosta ka xariiqay in masaafad weyn laga sameeyay la dagaallanka fayraska iyadoo laga mahadcelinayo tillaabooyinka la qaaday, Wasiirka Karaismailoğlu wuxuu hoosta ka xariiqay in tallaabooyin badan loo qaaday dhinacyo badan si loo yareeyo saameynta masiibooyinka ee shuruudaha dhaqan-dhaqaale iyo in nidaamka caadiga ah ee nolosha uu ku bilaaban doono hoos u dhaca xawliga faafa; Halkaa markay marayso, wuxuu xusay in habka caadiga ah ee lagu raaco gaadiidka tareenka la bilaabi doono howshana lagala socon doono talaabooyinka.
Tigidhada ayaa lagu iibin doonaa 50% awooda ku habboon masaafada bulshada iyo kala-goysyada iyadoo loo boodayo kursiga ”
Wasiir Karaismailoğlu wuxuu xasuusiyay in khadadka magaalada sida Marmaray iyo Başkentray aysan joojin duulimaadyadii howshan, wuxuuna intaa ku daray in tirada safarada si tartiib tartiib ah loo kordhin doono. Isagoo sharraxaya inay bilaabeen diyaarintooda tareenka caadiga ah iyo kan xawaaraha sare, Karaismailoğlu wuxuu yidhi, “Iibinta tikidhada tareenada xawaaraha dheereeya ayaa bilaaban doona maalinta labaad ee Ramadaan. Si kastaba ha noqotee, tikidhada tareenka waxaa laga iibsan karaa arjiga moobaylka iyo websaydhka ama lacagbixinta adoo aan la xiriirin. Tigidhada lagama iibin doono xarunta wicitaanka iyo hay'adaha. Iibinta tigidhada waxaa lagu fulin doonaa furaha HES (Hayat Eve Sığar) iyada oo loo sii marayo aaladda xogta macluumaadka ee Wasaaradda Caafimaadka si loo baaro xaaladda rakaabka ee la xiriira COVID-19. "Tigidhada looma iibin doono dadka leh naafada safarka ama aan helin lambarka" HEPP code ". Wasiirka Karaismailoğlu, oo caddeeyay inay bilaabi doonaan duullimaadyada 'YHT' bisha May 28 iyagoo fiiro gaar ah siinaya xeerarka masaafada bulshada iyo go'doominta, ayaa sheegay in tallaabooyinka loo qaadi doono masaafada bulshada dhexdeeda ee tareenka gudaheeda markii ugu horreysay, iyo in tikidhada tareenka rakaabka sidoo kale lagu iibin doono boqolkiiba 50 awoodda iyadoo la raacayo masaafada bulshada iyo tigidhada ayaa lagu iibin doonaa amar-is-dhaafsi iyada oo kuraasta la boodboodo. Wuxuu hoosta ka xariiqay.
'' Tareenada Xawaaraha Xawaaraha ku socda ayaa wadarta 16 duulimaad sameyn doona maalintii ''
Sababtoo ah xannibaadaha safarada isku xidhka ah ee ka dhanka ah halista COVID-19, YHT waxay joojisay duulimaadyadeedii ka baxsanaa Marmaray iyo Başkentray illaa 28-kii Maarso 2020, iyagoo hoosta ka xariiqay in duulimaadyada kaliya ee tagayaash ee laga qaado adeegyada tareenka ee ugu weyn iyo kuwa gobolka la bilaabi doono 28ka May 2020. Wuxuu sameyn doonaa wadar dhan 28 socdaal maalin kasta Ankara-Istanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-Istanbul illaa iyo 2020. Wasiir Karaismailoğlu ayaa sidoo kale sheegay in ay jiri doonaan ogeysiisyo isdaba joog ah oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo masaafada bulshada ee tareenka.
“Oggolaanshaha Safarka iyo Soo gudbinta Koodhka HEPP ee Loogu Baahan Yahay Safarka YHT”
Karaismailoğlu wuxuu kaloo cadeeyay in kuraasta gadaal ee gaari kasta oo la yiraahdo 'HATs' loo qoondeyn doono in lagu go'doomiyo rakaabka looga shakisan yahay coronavirus inta lagu gudajiro safarka. Safarada kuwa aan soo gudbin karin dukumintiga inta jeegga la joojinayo iyo khidmadaha tigidhada lama soo celin doono. Inta lagu gudajiro imaatinka rakaabka ilaa tareenka ilaa tareenka, rakaabka waxaa kormeeri doona shaqaalaha ay quseyso si loo ilaaliyo fogaanta bulshada. ” Iyagoo ogaysiinaya in meelahan tareenka ay sii ahaanayaan kuwo la tirtirayo ka hor iyo ka dib safarka, Karaismailoğlu wuxuu kaloo sheegay in bacaha gargaarka ee ugu horreeya ee wakiillada ilaaliya xawaaraha sare ay lahaan doonaan waji-gelin iyo galoofis.
Oggolaanshaha Safarka ee HAT